ဘဝအတွက် ခွန်အားတွေ ပြည့်လာစေဖို့ ဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့ စာအုပ် (၃)အုပ် - For her Myanmar
ကဲ… ဒီတစ်ခါတော့ စာအုပ်တွေအကြောင်းပေါ့။ ယောင်းတို့ အခုတလော ဘာစာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်နေလဲ။ စာမဖတ်ဖြစ်တာလား၊ ဘာစာအုပ်ဖတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာလား၊ ရွေးရပဲ ခက်နေတာလား။ ဝင်ဒီက ယောင်းတို့အတွက် စိတ်အပန်းပြေရုံသာမက ဖတ်ပြီးလို့ နောင်တမရစေမယ့် စာအုပ်လေး ၃အုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ ဝင်ဒီ ညွှန်းပေးတဲ့ စာအုပ်ဆိုရင် ဖတ်သာဖတ်ကြည့်၊ ဖတ်လိုက်လို့ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေအတွက် မနှမြောစေရဘူးလို့ အာမခံတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဆရာမ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) ရဲ့ စာအုပ် သုံးအုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်..
တစ်ကောင်တည်းပဲ ဒါပေမဲ့ ခြင်္သေ့ – စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)
ဒီဇာတ်လမ်းက မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်က ခက်ခဲလှတဲ့ ဘဝကြီးနဲ့ လောကဓံတွေကို အရှုံးမပေးဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာ။
သူ့နာမည်က မေခင်။ မေ့ခင်အမေရော အဖေရောက ဆုံးသွားပြီ။ သူ့မိဘတွေ ဆုံးသွားပြီးကတည်းက မေခင်က အိမ်နီးချင်း အဒေါ်လင်မယား(အမျိုးမတော်ပါဘူး)ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ နေတယ်။ ဆယ်တန်းကို ထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့ အောင်လို့ ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ အမှတ်မီပေမဲ့ ကျောင်းစရိတ်ကြောင့် ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး ဈေးထဲမှာ အေးအေးလူလူ အထည်ချုပ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေတဲ့ ကောင်မလေး။ သူ့ဘဝလေးဟာ ဦးဖုန်းမြင့်ဆိုတဲ့ လက်ထောက်မြို့ပိုင်အသစ်လေး သူတို့မြို့ကို မရောက်လာခင်အထိ အေးချမ်းခဲ့တာပေါ့။
တကယ်တော့ ဦးဖုန်းမြင့်က မေ့ခင်ကို ချစ်ပါတယ်။ မေခင်ကလည်း ဦးဖုန်းမြင့်ကို ချစ်တယ်။ ဦးဖုန်းမြင့်က မေခင့်ကို လက်ထပ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ပြီးသား။ ဒါကြောင့်လည်း မေခင့်က သူ့ကို ဆေးကျောင်းထားပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဦးဖုန်းမြင့်ရဲ့ အကူအညီကို လက်ခံခဲ့တာ။
မေခင် ဆေးကျောင်းသွားမတက်ခင်မှာပဲ ဦးဖုန်းမြင့်ဟာ အိမ်ထောင်သည်၊ ကလေးတစ်ယောက်အဖေဆိုတာ သိသွားတယ်။ နောက်ကျောဓားနဲ့ အထိုးခံရတဲ့ မေခင်ဟာ သူ့အိမ်ကနေ ထွက်သွားကော။ စိတ်နာလည်း နာချင်စရာပေါ့။ သူများအငယ်အနှောင်း ဖြစ်ရမယ့် ကိစ္စလေ။ လောကဓံတွေက မေခင့်ဘဝကို ဒီကနေစပြီး ရိုက်တာပဲ။ အိမ်ကနေ ထွက်လာတဲ့ မေခင်ဟာ ကသာကို သွားတဲ့လမ်းမှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ ရှိသမျှ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ပါသွားတဲ့အပြင် ရထားလက်မှတ်ပါ ပါသွားလို့ ရထားခိုးစီးတဲ့သူအဖြစ် အဖမ်းခံရခါနီးဆဲဆဲမှာ ရထားပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်စီးခဲ့တဲ့ ကြီးတော်ကြီးဆိုတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်က မေခင့်ကို ကယ်ပေးခဲ့တယ်။ မေခင့်ရဲ့ လောကဓံတွေ၊ ဘဝအပြောင်းအလဲတွေက အဲမှာ စတော့တာပါပဲ…..
Related Article >>> ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိချင်ကြသူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း (၁)အုပ်
ခေါက်ထီးလေး မလုံ့တလုံ – စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)
ခေါက်ထီးလေး မလုံ့တလုံ က ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးယောင်းတို့ အတွက် စိမ်းမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးသားဆိုလည်း စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါလို့ ညွှန်းမယ်နော်။ စာအုပ်နဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့က ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျချင်း အရမ်း ခြားနားနေလို့ပါ။
အမွန်နဲ့ ကြွေ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့ ဘဝခံယူချက်ချင်းက တော်တော်ခြားနားတယ်။ အမွန်က ဆယ်တန်းပြန်ဖြေဖို့နဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ချင်လို့ အိမ်ကနေ ရန်ကုန်ကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကောင်မလေး။ အမွန် ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ကျလို့ အမွန့်အမေက အမွန့်ကို ကျောင်းဆက်မထားတော့ဘဲ သူနဲ့ အတူ ဈေးထွက်ရောင်းစေချင်တယ်။ အမွန်က ကားလမ်းဘေးက သူ့အမေရဲ့ လမ်းဘေးထမင်းဆိုင်လေးမှာ သူ့ဘဝကို မကုန်ဆုံးချင်ဘူး။ အမွန်က ဘဝကို စွန့်စားချင်တယ်၊ သူ့ဘဝကို ဒီထက် ပိုပြီး မြှင့်တင်ချင်တယ်၊ စိတ်ဓာတ်လည်း မာတဲ့ မိန်းကလေးမျိုး။
တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ကြွေ လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ နုနုကြွေဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက အမွန်နဲ့ယှဉ်ရင် မိုးနဲ့ မြေ။ အမွန်က ဆင်းရဲသလောက်၊ ချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့ ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန်ရသလောက် ကြွေက ဘဝကို အေးဆေး ဒူးနန့် နေချင်ပြီး အဲလို နေရလောက်တဲ့ အခြေနေမှာလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ဆုံစေတာက ဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုမှာ။ နှစ်ယောက်က အခန်းဖော်တွေပေါ့။
ကြွေက သူ့အစ်မအိမ်ကနေ ဆင်းလာတာ။ ကြွေက လှတယ်၊ လှသလို သူ့နားမှာ ယောက်ျားလေးတွေဆိုတာလည်း ဝိုင်းဝိုင်းလည်။ ဝိုင်းဝိုင်းလည်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလည်း ကြွေ့မှာ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ကြွေက အပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး၊ ကြိုးလည်းမကြိုးစားချင်ဘူး။ ဘဝကို ရေစုန်မျောလိုက်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုး။ ပြီးတော့ သူ့အနားမှာ ယောက်ျားလေးတွေ ဝိုင်းနေတာကိုလည်း သူက သာယာတယ်။ ပြီးတော့ အသုံးအဖြုန်းကလည်း အရမ်းကြမ်းတယ်။ အပေါ်ယံမှာ သာယာနေတဲ့ ဘဝကိုပေါ့ပျက်ပျက်ပဲ နေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ လက်ထဲ ပိုက်ဆံမရှိဘဲနဲ့ ဘယ်လောက် ခံနိုင်မှာလဲ။ ကြွေ့ဘဝဟာ စပျက်တော့တာပါပဲ…
Related Article >>> လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ဖတ်ရလွယ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေး (၂) အုပ်
သတ္တိရှိရင် မြေကြီးနင်းကြည့်ပါလား – စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)
ကဲ… နောက်ဆုံးတစ်အုပ်ကိုတော့ အပေါ်က နှစ်အုပ်နဲ့ နည်းနည်းကွာတာလေးနဲ့ ညွှန်းပေးမယ်နော်။ အပေါ်၂အုပ်မှာက ဇာတ်ကောင်တွေက အရမ်း ဆင်းရဲကြတယ်လေ။ အခုတစ်အုပ်မှာကကျ ဇာတ်ကောင် ခိုင်ဇင်ရှားဟာ ချမ်းသာတယ်၊ တော်ရုံမဟုတ်ဘူး ကျိကျိတက်ကို ချမ်းသာတာ။ ရွှေဇွန်းကိုက်ပြီး ရွှေလင်ဗန်းနဲ့ အချင်းဆေး မွေးလာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်။
ရှား ကျောင်းတတ်ကတည်းက ရှားရဲ့မာမီက ကျောင်းမုန့်စားဆင်းချိန်ဆိုရင် ဘဲလ်အဲယားကားနဲ့ ပေါက်ချလာပြီး ကျောင်းရှေ့မှာ ရပ်ထားပြီး ရှားကို ငွေလင်ပန်း၊ ငွေဇွန်း၊ ငွေပန်းကန်၊ ငွေခွက်တွေနဲ့ နေ့လယ်စာ ကျွေးတယ်။ ရှားဘဝက အဲ့လောက်ထိကို ချမ်းသာတာ။ ကံကြမ္မာက ချမ်းသာတဲ့လူကိုလည်း မျက်နှာသာမပေးဘူးနော်။ ရှားရဲ့ ဒယ်ဒီ စီးလာတဲ့ ရထားမှောက်လို့ ရှားဒယ်ဒီဟာ ဆုံးသွားတယ်။ ရှားတို့ မိသားစုရဲ့ ရွှေတောင်ကြီး ပြိုလို့မှ သိပ်မကြာဘူး ရှားတို့ အိမ် မီးလောင်ကော။ မီးက ရှို့မီး။ ငွေဇွန်း၊ ငွေပန်းကန်တွေနဲ့မှ ပွဲတော်တည်တတ်တဲ့ ရှားတို့ မိသားစုရဲ့ အိမ်လေးဟာ အိမ်ရှေ့လှေကားထစ်လေးပဲ ကျန်တယ်။ မီးခံသေတ္တာထဲက ပိုက်ဆံတွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေကလည်း အိမ်ကို မီးရှို့သွားတဲ့ ရှားတို့ ဒရိုင်ဘာ မ,သွားပြီ။ ရှိရှိသမျှ ကုန်တာပေါ့။
ရှားမာမီဆိုရင် မရူးသွားတာတောင် ကံကောင်း။ ဒါက ပုံမှန်ဆိုရင် သွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေလေ။ ဒါပေမဲ့ ရှားဆိုတဲ့ မိန်းကလေးက တော်တော် အသည်းမာတာ။ ရှားနဲ့ လူကြီးချင်း သဘောတူထားတဲ့၊ ရှားကလည်း သဘောကျနေတဲ့ ကိုကို က ရှားတို့နဲ့ အမျိုးမကင်းဘူး။ သူတို့က ရှားတို့ထက် ပိုချမ်းသာတာပေါ့နော်။ ရှားနဲ့ဆိုရင် ကြီးကြီးတော်တာပေါ့၊ ရှားမာမီရဲ့ အစ်မကိုး။ သူတို့က ရှားတို့ကို အကူအညီပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှားက လက်မခံဘူး။ ရှားမာမီဆိုတာ ရှားမျက်နှာပဲ ကြည့်ပြီး ရှားဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ပဲ လိုက်တော့တယ်။ ရှားကလည်း အသက်ငယ်ပေမဲ့ ထက်တယ် အရမ်း။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးက မိန်းကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အဖေသူငယ်ချင်းရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ရေနံတင်ဒါတင်သတဲ့။ အဲဒီမှာ တင်ဒါအောင်သွားတာက ရှားဘဝရဲ့ ပထမဆုံး အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ရှားက ဘာကိုမှ မကြောက်တော့ဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုတွေလည်း ပိုရှိလာတယ်။ သူ့ခြေထောက်ပေါ်သူ ရဲရဲကြီး စနင်းတော့တယ်။ ကိုကိုကတော့ ရှားနဲ့ ပြဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်း။ သူက ရှားကို အိမ်မှာပဲ အေးဆေးနေခိုင်းပြီး သူ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက် လုိုက်စေချင်တာ။ ရှားကလည်း သူ့ဘဝကို သူပဲ ဦးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ အရမ်းထက်တဲ့ မိန်းကလေး။ လိုတိုင်းမရတဲ့ ဘဝနဲ့ အချစ်ရဲ့အောက်မှာ ရှားဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်ခတ်လာတဲ့ လောကဓံကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ ဖြေရှင်းသွားလဲဆိုတာ…..
ကဲ… ဝင်ဒီကတော့ ယောင်းတို့ ဖတ်ဖုို့ စာအုပ်လေးတွေကို ညွှန်းလိုက်ပါပြီနော်။ ယောင်းတို့ဘက်က ဖတ်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဝင်ဒီ့အညွှန်းကြောင့် ယောင်းတို့ စာဖတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ဝင်ဒီ ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်လို့…..
ဝငျဒီ ညှနျးပေးတဲ့ စာအုပျဆိုရငျ ဖတျသာဖတျကွညျ့၊ ဖတျလိုကျလို့ ကုနျသှားတဲ့ အခြိနျတှအေတှကျ မနှမွောစရေဘူးလို့ အာမခံတယျ
ကဲ… ဒီတဈခါတော့ စာအုပျတှအေကွောငျးပေါ့။ ယောငျးတို့ အခုတလော ဘာစာအုပျတှေ ဖတျဖွဈနလေဲ။ စာမဖတျဖွဈတာလား၊ ဘာစာအုပျဖတျရမှနျးမသိဖွဈနတောလား၊ ရှေးရပဲ ခကျနတောလား။ ဝငျဒီက ယောငျးတို့အတှကျ စိတျအပနျးပွရေုံသာမက ဖတျပွီးလို့ နောငျတမရစမေယျ့ စာအုပျလေး ၃အုပျနဲ့ မိတျဆကျပေးမယျနျော။ ဝငျဒီ ညှနျးပေးတဲ့ စာအုပျဆိုရငျ ဖတျသာဖတျကွညျ့၊ ဖတျလိုကျလို့ ကုနျသှားတဲ့ အခြိနျတှအေတှကျ မနှမွောစရေဘူးလို့ အာမခံတယျ။ ဒီနတေ့ော့ ဆရာမ စမျးစမျးနှဲ့(သာယာဝတီ) ရဲ့ စာအုပျ သုံးအုပျနဲ့ မိတျဆကျပေးမယျနျော..
တဈကောငျတညျးပဲ ဒါပမေဲ့ ခွင်ျသေ့ – စမျးစမျးနှဲ့(သာယာဝတီ)
ဒီဇာတျလမျးက မိနျးမငယျလေးတဈယောကျက ခကျခဲလှတဲ့ ဘဝကွီးနဲ့ လောကဓံတှကေို အရှုံးမပေးဘဲ ကွံ့ကွံ့ခံပွီး ဘယျလိုရငျဆိုငျသှားလဲဆိုတဲ့အကွောငျး ရေးထားတာ။
သူ့နာမညျက မခေငျ။ မခေ့ငျအမရေော အဖရေောက ဆုံးသှားပွီ။ သူ့မိဘတှေ ဆုံးသှားပွီးကတညျးက မခေငျက အိမျနီးခငျြး အဒျေါလငျမယား(အမြိုးမတျောပါဘူး)ရဲ့ အုပျခြုပျမှုအောကျမှာ နတေယျ။ ဆယျတနျးကို ထူးထူးခြှနျခြှနျနဲ့ အောငျလို့ ဆေးကြောငျးတကျဖို့ အမှတျမီပမေဲ့ ကြောငျးစရိတျကွောငျ့ ဆေးကြောငျးတကျဖို့ စှနျ့လှတျလိုကျပွီး ဈေးထဲမှာ အေးအေးလူလူ အထညျခြုပျပွီး အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပွုနတေဲ့ ကောငျမလေး။ သူ့ဘဝလေးဟာ ဦးဖုနျးမွငျ့ဆိုတဲ့ လကျထောကျမွို့ပိုငျအသဈလေး သူတို့မွို့ကို မရောကျလာခငျအထိ အေးခမျြးခဲ့တာပေါ့။
တကယျတော့ ဦးဖုနျးမွငျ့က မခေ့ငျကို ခဈြပါတယျ။ မခေငျကလညျး ဦးဖုနျးမွငျ့ကို ခဈြတယျ။ ဦးဖုနျးမွငျ့က မခေငျ့ကို လကျထပျဖို့အထိ ရညျရှယျပွီးသား။ ဒါကွောငျ့လညျး မခေငျ့က သူ့ကို ဆေးကြောငျးထားပေးမယျဆိုတဲ့ ဦးဖုနျးမွငျ့ရဲ့ အကူအညီကို လကျခံခဲ့တာ။
မခေငျ ဆေးကြောငျးသှားမတကျခငျမှာပဲ ဦးဖုနျးမွငျ့ဟာ အိမျထောငျသညျ၊ ကလေးတဈယောကျအဖဆေိုတာ သိသှားတယျ။ နောကျကြောဓားနဲ့ အထိုးခံရတဲ့ မခေငျဟာ သူ့အိမျကနေ ထှကျသှားကော။ စိတျနာလညျး နာခငျြစရာပေါ့။ သူမြားအငယျအနှောငျး ဖွဈရမယျ့ ကိစ်စလေ။ လောကဓံတှကေ မခေငျ့ဘဝကို ဒီကနစေပွီး ရိုကျတာပဲ။ အိမျကနေ ထှကျလာတဲ့ မခေငျဟာ ကသာကို သှားတဲ့လမျးမှာ ခါးပိုကျနှိုကျခံလိုကျရတယျ။ ရှိသမြှ ပိုကျဆံတှေ အကုနျပါသှားတဲ့အပွငျ ရထားလကျမှတျပါ ပါသှားလို့ ရထားခိုးစီးတဲ့သူအဖွဈ အဖမျးခံရခါနီးဆဲဆဲမှာ ရထားပျေါမှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျထိုငျစီးခဲ့တဲ့ ကွီးတျောကွီးဆိုတဲ့ အဒျေါကွီးတဈယောကျက မခေငျ့ကို ကယျပေးခဲ့တယျ။ မခေငျ့ရဲ့ လောကဓံတှေ၊ ဘဝအပွောငျးအလဲတှကေ အဲမှာ စတော့တာပါပဲ…..
Related Article >>> ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ သိခငျြကွသူတိုငျး ဖတျသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျး (၁)အုပျ
ခေါကျထီးလေး မလုံ့တလုံ – စမျးစမျးနှဲ့ (သာယာဝတီ)
ခေါကျထီးလေး မလုံ့တလုံ က ရုပျရှငျဝါသနာအိုးယောငျးတို့ အတှကျ စိမျးမှာတော့ မဟုတျပါဘူးနျော။ ရုပျရှငျကွညျ့ပွီးသားဆိုလညျး စာအုပျကို ဖတျကွညျ့ပါလို့ ညှနျးမယျနျော။ စာအုပျနဲ့ ရုပျရှငျနဲ့က ပေးခငျြတဲ့ မကျဆခြေျ့ခငျြး အရမျး ခွားနားနလေို့ပါ။
အမှနျနဲ့ ကွှေ ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးနှဈယောကျရဲ့ဘဝနဲ့ ဘဝခံယူခကျြခငျြးက တျောတျောခွားနားတယျ။ အမှနျက ဆယျတနျးပွနျဖွဖေို့နဲ့ တက်ကသိုလျတကျခငျြလို့ အိမျကနေ ရနျကုနျကို ထှကျပွေးလာတဲ့ ကောငျမလေး။ အမှနျ ဆယျတနျးတဈနှဈကလြို့ အမှနျ့အမကေ အမှနျ့ကို ကြောငျးဆကျမထားတော့ဘဲ သူနဲ့ အတူ ဈေးထှကျရောငျးစခေငျြတယျ။ အမှနျက ကားလမျးဘေးက သူ့အမရေဲ့ လမျးဘေးထမငျးဆိုငျလေးမှာ သူ့ဘဝကို မကုနျဆုံးခငျြဘူး။ အမှနျက ဘဝကို စှနျ့စားခငျြတယျ၊ သူ့ဘဝကို ဒီထကျ ပိုပွီး မွှငျ့တငျခငျြတယျ၊ စိတျဓာတျလညျး မာတဲ့ မိနျးကလေးမြိုး။
တခွားတဈဖကျမှာတော့ ကွှေ လို့ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ နုနုကွှဆေိုတဲ့ ကောငျမလေးက အမှနျနဲ့ယှဉျရငျ မိုးနဲ့ မွေ။ အမှနျက ဆငျးရဲသလောကျ၊ ခြို့ခြို့တဲ့တဲ့နဲ့ ကိုယျထူးကိုယျခြှနျရသလောကျ ကွှကေ ဘဝကို အေးဆေး ဒူးနနျ့ နခေငျြပွီး အဲလို နရေလောကျတဲ့ အခွနေမှောလညျး ရှိတယျ။ သူတို့ နှဈယောကျကို ဆုံစတောက ဘျောဒါဆောငျတဈခုမှာ။ နှဈယောကျက အခနျးဖျောတှပေေါ့။
ကွှကေ သူ့အဈမအိမျကနေ ဆငျးလာတာ။ ကွှကေ လှတယျ၊ လှသလို သူ့နားမှာ ယောကျြားလေးတှဆေိုတာလညျး ဝိုငျးဝိုငျးလညျ။ ဝိုငျးဝိုငျးလညျအောငျ လုပျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးလညျး ကွှမှေ့ာ ရှိတယျ။ ပွီးတော့ ကွှကေ အပငျပနျးမခံနိုငျဘူး၊ ကွိုးလညျးမကွိုးစားခငျြဘူး။ ဘဝကို ရစေုနျမြောလိုကျခငျြတဲ့ မိနျးကလေးမြိုး။ ပွီးတော့ သူ့အနားမှာ ယောကျြားလေးတှေ ဝိုငျးနတောကိုလညျး သူက သာယာတယျ။ ပွီးတော့ အသုံးအဖွုနျးကလညျး အရမျးကွမျးတယျ။ အပျေါယံမှာ သာယာနတေဲ့ ဘဝကိုပေါ့ပကျြပကျြပဲ နတေတျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ လကျထဲ ပိုကျဆံမရှိဘဲနဲ့ ဘယျလောကျ ခံနိုငျမှာလဲ။ ကွှဘေ့ဝဟာ စပကျြတော့တာပါပဲ…
Related Article >>> လှယျကူရိုးရှငျးပွီး ဖတျရလှယျတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအုပျလေး (၂) အုပျ
သတ်တိရှိရငျ မွကွေီးနငျးကွညျ့ပါလား – စမျးစမျးနှဲ့(သာယာဝတီ)
ကဲ… နောကျဆုံးတဈအုပျကိုတော့ အပျေါက နှဈအုပျနဲ့ နညျးနညျးကှာတာလေးနဲ့ ညှနျးပေးမယျနျော။ အပျေါ၂အုပျမှာက ဇာတျကောငျတှကေ အရမျး ဆငျးရဲကွတယျလေ။ အခုတဈအုပျမှာကကြ ဇာတျကောငျ ခိုငျဇငျရှားဟာ ခမျြးသာတယျ၊ တျောရုံမဟုတျဘူး ကြိကြိတကျကို ခမျြးသာတာ။ ရှဇှေနျးကိုကျပွီး ရှလေငျဗနျးနဲ့ အခငျြးဆေး မှေးလာတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ။
ရှား ကြောငျးတတျကတညျးက ရှားရဲ့မာမီက ကြောငျးမုနျ့စားဆငျးခြိနျဆိုရငျ ဘဲလျအဲယားကားနဲ့ ပေါကျခလြာပွီး ကြောငျးရှမှေ့ာ ရပျထားပွီး ရှားကို ငှလေငျပနျး၊ ငှဇှေနျး၊ ငှပေနျးကနျ၊ ငှခှေကျတှနေဲ့ နလေ့ယျစာ ကြှေးတယျ။ ရှားဘဝက အဲ့လောကျထိကို ခမျြးသာတာ။ ကံကွမ်မာက ခမျြးသာတဲ့လူကိုလညျး မကျြနှာသာမပေးဘူးနျော။ ရှားရဲ့ ဒယျဒီ စီးလာတဲ့ ရထားမှောကျလို့ ရှားဒယျဒီဟာ ဆုံးသှားတယျ။ ရှားတို့ မိသားစုရဲ့ ရှတေောငျကွီး ပွိုလို့မှ သိပျမကွာဘူး ရှားတို့ အိမျ မီးလောငျကော။ မီးက ရှို့မီး။ ငှဇှေနျး၊ ငှပေနျးကနျတှနေဲ့မှ ပှဲတျောတညျတတျတဲ့ ရှားတို့ မိသားစုရဲ့ အိမျလေးဟာ အိမျရှလှေ့ကေားထဈလေးပဲ ကနျြတယျ။ မီးခံသတ်ေတာထဲက ပိုကျဆံတှေ၊ လကျဝတျရတနာတှကေလညျး အိမျကို မီးရှို့သှားတဲ့ ရှားတို့ ဒရိုငျဘာ မ,သှားပွီ။ ရှိရှိသမြှ ကုနျတာပေါ့။
ရှားမာမီဆိုရငျ မရူးသှားတာတောငျ ကံကောငျး။ ဒါက ပုံမှနျဆိုရငျ သှကျသှကျခါအောငျ ရူးသှားနိုငျတဲ့ အခွအေနလေေ။ ဒါပမေဲ့ ရှားဆိုတဲ့ မိနျးကလေးက တျောတျော အသညျးမာတာ။ ရှားနဲ့ လူကွီးခငျြး သဘောတူထားတဲ့၊ ရှားကလညျး သဘောကနြတေဲ့ ကိုကို က ရှားတို့နဲ့ အမြိုးမကငျးဘူး။ သူတို့က ရှားတို့ထကျ ပိုခမျြးသာတာပေါ့နျော။ ရှားနဲ့ဆိုရငျ ကွီးကွီးတျောတာပေါ့၊ ရှားမာမီရဲ့ အဈမကိုး။ သူတို့က ရှားတို့ကို အကူအညီပေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရှားက လကျမခံဘူး။ ရှားမာမီဆိုတာ ရှားမကျြနှာပဲ ကွညျ့ပွီး ရှားဆုံးဖွတျခကျြနောကျပဲ လိုကျတော့တယျ။ ရှားကလညျး အသကျငယျပမေဲ့ ထကျတယျ အရမျး။
ဆယျတနျးအောငျပွီးက မိနျးကလေးငယျလေးတဈယောကျဟာ သူ့အဖသေူငယျခငျြးရဲ့ လမျးညှနျမှုနဲ့ ရနေံတငျဒါတငျသတဲ့။ အဲဒီမှာ တငျဒါအောငျသှားတာက ရှားဘဝရဲ့ ပထမဆုံး အောငျမွငျမှုတဈခုပါပဲ။ ရှားက ဘာကိုမှ မကွောကျတော့ဘူး။ သူ့ကိုယျသူ ယုံကွညျမှုတှလေညျး ပိုရှိလာတယျ။ သူ့ခွထေောကျပျေါသူ ရဲရဲကွီး စနငျးတော့တယျ။ ကိုကိုကတော့ ရှားနဲ့ ပွဒါးတဈလမျး သံတဈလမျး။ သူက ရှားကို အိမျမှာပဲ အေးဆေးနခေိုငျးပွီး သူ့ခေါငျးဆောငျမှုအောကျ လိုကျစခေငျြတာ။ ရှားကလညျး သူ့ဘဝကို သူပဲ ဦးဆောငျမယျဆိုတဲ့ အရမျးထကျတဲ့ မိနျးကလေး။ လိုတိုငျးမရတဲ့ ဘဝနဲ့ အခဈြရဲ့အောကျမှာ ရှားဟာ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ရိုကျခတျလာတဲ့ လောကဓံကို ဘယျလိုဘယျပုံနဲ့ ဖွရှေငျးသှားလဲဆိုတာ…..
ကဲ… ဝငျဒီကတော့ ယောငျးတို့ ဖတျဖို့ စာအုပျလေးတှကေို ညှနျးလိုကျပါပွီနျော။ ယောငျးတို့ဘကျက ဖတျဖို့ပဲ ကနျြတော့တယျ။ ဝငျဒီ့အညှနျးကွောငျ့ ယောငျးတို့ စာဖတျဖွဈသှားတယျဆိုရငျပဲ ဝငျဒီ ရေးရကြိုးနပျပါတယျလို့…..
Tags: Book, Book review, Give, Motivate, review, Strength
ယောင်းတို့ အဝတ်ဘီရိုထဲမှာ ဘရာ ဘယ်နှစ်ထည် ရှိဖို့ လိုအပ်လဲ?
Windy November 23, 2018